मलाई चाहिने वास्तविक धर्म कुन हो?
मेकडॅनल जस्ता तिव्र खाना बनाउने रेस्टुराँहरुले हाम्रो मुताबिक खाना तयार गर्न सफल भएका हुनाले, हाम्रो आकर्षण हासिल गरेको छ। कुनै कफी भण्डारहरुले १०० किसिमका स्वाद र विभिन्न प्रकारका कफिहरु उपलब्ध भएको बिज्ञापन गर्दै आएका छन्। जब हामी घर वा गाडी खरिद गर्न जान्छौं त्यहि बेला हामी हामीलाई चाहिएको सुविधा र आवश्यक भएका कुराहरु छनौँट गर्न सक्दछौँ। हामी केवल चकलेट, भनिल्ला र स्ट्रबेरी जस्तो एक दुई थरिका स्वादले मात्र सन्तुष्ट हुन्दैनौँ। छनौँट प्रमुख भईसकेको छ। तपाईंलाई चाहिने चिजबिजहरु आवश्यक्ता अनुसार मन पर्ने गरी उपलब्ध छ।
त्यसो भए, तपाईंलाई सुहाउने धर्मको बारेमा कुरा के त? एक धर्म जसद्वारा कुनै गलत महसुस गराउदैन, कुनै कडा आदेश पालनाको दिदैँन, साथै यसो गर, उसो नगर भन्ने निस्सासिँदो बोझहरु ठप्दैन। के त्यस्तो धर्म पाईन्छ जसलाई मैले माथी बयान गरेको छु। आइसक्रिमको विभिन्न परिकार रोजे जस्तो के धर्म चुन्न सकिन्छ?
थुप्रै भाषणहरु हाम्रो ध्यान खिच्न एक आपसमा बढी प्रयत्नशील छन्, त्यसो हो भने किन हामीले येशू ख्रीष्ट लाई सबैभन्दा माथी हो भनी विचार गर्छौँ, हामीले भनु कुनै व्यक्ति मुहम्मद वा कन्फुशियस्, बुध्द वा चार्ल्स टेज रुसल, वा जोसेफ स्मिथ भन्दा पहिले येशूलाई किन माथी हो भनी विचार गर्छौँ? के सबै बाटो स्वर्गमा अन्त हुदैँन र? के सबै धर्म वास्तवमा एउटै होइन र? साँचो भन्ने हो भने सबै धर्मले स्वर्गमा लादैँन, जसरी सबै बाटोले इण्डियाना लादैँन।
येशूले मात्र परमेश्वरको अधिकार अनुरुप बोल्न सक्नुहुन्छ , किनभने येशूले मात्र मृत्यु माथि विजय हासिल गर्नु भयो। मुहम्मद, कन्फुसियस तथा अरु जम्मै व्यक्तित्वहरु तिनीहरुकै चिहानमा आजसम्म पनि कुहिएर रहेका हामी पाउछौँ। तर येशू आफ्नै शक्तिको उपयोग गरि ३ दिनपछि रोमीको क्रूसको मृत्यु पछि गुफामा रहेको चिहानबाट बौरी उठ्नु भयो। कुनैपनि सृष्टि जसले मृत्यु माथि विजयी हासिल गर्दछ, ऊहाँलाई हाम्रो ध्यान जानु स्वाभाविक मात्र नभई अत्यन्त आवश्यक्तापूर्ण पनि हुन्छ।
येशूको पुनरूत्थान भएको समर्थन गर्ने तथ्यहरु निरन्तरात्मक छन्। पहिले, पाँचसय भन्दा बढी दर्शकहरु जसले ख्रीष्ट मृत्युबाट ब्युझेँको देखेका थिए। त्यो प्रत्यक्ष दर्शकहरु कुनै तुलनाले गर्दा पनि प्रशस्त थानिन्छ। पाँचसय बयानलाई अस्विकार गर्नु सकिँदैन। त्यस बाहेक अझै खाली चिहानका तथ्यहरु पनि जोडदार छन्। येशूका विरोधिहरुले उहाँको मृतक तथा सडेको शरीरलाई पैदा गर्नु पर्ने थियो तर त्यहाँ मुर्दा शरीरनै थिएन। चिहान रित्तो थियो। के उहाँका चेलाहरुले उहाँको शरीरलाई चोर्न सफल भए कि? असम्भव, किनकि यस घट्ना हुनु पहिले उहाँको शरीर रहेको गुफामा रोमी सिपाहिहरुले सक्त पालो दिइरहेका थिए। उहाँको नजदिक पछ्याउने डरमुख चेलाहरु उहाँको पक्डाई र क्रूसको मृत्यु पछि को डरले कामी हिड्ने माझीहरु रोमीका विशिष्ट सिपाहीका सामना गर्ने सम्भावना नै थिएन। न त उनिहरूले आफ्नो जीवन त्यागेर शहीद हुने थीए – धेरै जसोले - धोखाधडी गरे - यसको साँचो तथ्य यो हो की येशूको पुनरूत्थान मानविक बयान गर्ननै सकिन्न।
फेरी, उहाँ जस्ता महान व्यक्तित्व जसले मृत्यु माथि नियन्त्रण राख्न सफल हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ध्यान खिच्न लायकको हुनुहुन्छ। उहाँले मृत्युमा विजयी हासिल गर्नुभयो; त्यसैले, हामी उहाँले भन्नुभएका कुरा सुनौँ। येशू मुक्तिको लागि एकमात्र बाटो भएको दावी गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १४:६)। उहाँ एक बाटो मात्र होइन; उहाँ अरु बाटो मध्य एक होइन। तर येशू एक मात्र बाटो हुनुहुन्छ।
र यहि येशू भन्नुहुन्छ, “हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मकहाँ आओ, म तिमीहरुलाई विश्राम दिनेछु” (मत्ती ११:२८)। यो संसार गाह्रो तथा जीवन कठीन छ। यहाँ धेरै जस्तो हामी रत्तगत, चोटग्रष्ट र लडाईले घाइते हुन्छौँ। मान्नुहुन्छ? तपाईंलाई के चाहिन्छ? पुनर्स्थापना वा केवल धर्म? जीवित उद्धारकर्ता वा मृतक भविष्वक्ता कहलाइने धर्म संस्थापक? एक अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा रित्तो क्रियाकाज चाहानुहुन्छ? येशू एक मात्र चाहाना नभई - एकमात्र छनौँट रहनु भएको छ।
यदि तपाईंले क्षमाको खोजी गर्न चाहानुहुन्छ भने येशू नै सुहाउदों “धर्म” हुनुहुन्छ (प्रेरित १०:४३)। यदि तपाईंले परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध चाहानुहुन्छ भने येशू नै एक सुहाँउदो “धर्म” हुनुहुन्छ (यूहन्ना१०:१०)। यदि तपाईं अनन्त सम्म स्वर्गमा घर बसाल्न चाहानुहुन्छ भने येशू नै तपाईंको सुहाउँदो “धर्म” हुनुहुन्छ (यूहन्ना३:१६)। आफ्नो मुक्तिदाताको रुपमा तपाईंको विश्वास येशू ख्रीष्टमा राख्नुहोस्; तपाईंले केहि भुल गर्नुहुनेछैन! उहाँमा तपाईंको पाप क्षमाको निम्ति भरोसा गर्नुहोस्; तपाईं पछुताउनुहुने छैन।
यदि तपाईं येशू ख्रीष्टसँग “सही सम्बन्ध” चाहानुहुन्छ, यहाँ एक साधारण प्रार्थना छ। यो प्रार्थना गर्नाले वा अरू कुनै प्रार्थनाले तपाईंलाई बचाउन सक्दैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्र पापहरूको क्षमा पाइन्छ। यो प्रार्थना केवल तपाईंको विश्वासलाई प्रभुमा व्यक्त गर्न र तपाईंलाई क्षमा दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउनु हो। “प्रभु, म जान्दछु कि मैले तपाईंको विरूद्धमा पाप गरेको छु, र सजाय पाउने योग्यको छु। तर येशू ख्रीष्टले त्यो सजाय भोग्नुभयो जसको म योग्य थिए, ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मेरो क्षमा हुन सकोस्। मुक्तिको लागि म मेरो भरोसा तपाईंमा राख्दछु। तपाईंको अचम्मको अनुग्रह र क्षमादानको निम्ति तपाईंलाई धन्यवाद! आमिन!”